(L) ဦး နှောက်၏ရေရှည်အကျိုးခံစားခွင့်စနစ် Dopamine (2013) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn ပေါ်တွင်မှီခိုသည်
(L) ဦးနှောက်ရဲ့ Long-Term ဆုကြေးစနစ် (2013) Dopamine ပေါ်တွင်မူတည်
ဦးနှောက်ရဲ့ Long-Term ဆုကြေးစနစ် Dopamine ပေါ်တွင်မူတည်
သြဂုတ်လ 5, 2013
redOrbit.com များအတွက် Brett Smith က - သင်၏ဠာအွန်လိုင်း
ကောလိပ်မှဘွဲ့ရမှတိုင်းပြည်အနှံ့ကားမောင်း မှစ. ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များမကြာခဏချက်ချင်းဆုလာဘ်မျက်မှောက်အတွင်းမှာမဖြစ်သည့်အခါအပေါ်အာရုံစိုက်နေဖို့ခက်ခဲသည်။
ဤအရေရှည်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်သည်အထိဆီယက်တဲလ်နှင့် MIT မှခုနှစ်တွင်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကနေသုတေသီတစ်ဦးကအသင်းကိုမကြာသေးမီကဂျာနယ်သဘာဝတရားထဲမှာအစီရင်ခံစာအတိုင်း, ဦးနှောက်အာရုံစိုက်နေဖို့နိုင်မည်သို့သစ်ကိုအသေးစိတျကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါပူးတွဲအသင်းရဲ့သုတေသနဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်အဖို့ neurotransmitter dopamine နဲ့ဆက်နွယ်နေဘူးသောယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်တည်ဆောက်။ အများဆုံးယခင်လေ့လာမှုများချက်ချင်းဆုလာဘ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ dopamine မှာရှာဖွေနေပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြစဉ်အခါ, လေ့လာမှုအသစ်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်ပြီးနောက်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်အဖြစ် dopamine ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကြွက်များ '' ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ၏အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာရန်, အသင်း UW အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်ရှင်ပေါလု Phillips ကကတီထွင်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုစဉ်ဆက်မပြတ်၎င်း၏လြှပျစစျလက်မှတ်ရှာဖွေနေခြင်းဖြင့် dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းသေးငယ်ထဲထညျ့လျှပ်ပါဝငျကွောငျးအစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry (FSCV) ကိုခေါ်။ ,
"တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဝင်္ကတဆင့်လွတ်လပ်စွာပြောင်းရွှေ့သကဲ့သို့ငါတို့သည်တစ်ပြိုင်နက်ဦးနှောက်ထဲမှာအထိလေးကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များမှာ dopamine တိုင်းတာနိုင်အောင်ကျနော်တို့ FSCV နည်းလမ်းအဆင်ပြေအောင်," Co-ရေးသားသူမာကု Howe, Northwestern University ရဲ့လက်ရှိ Post-ပါရဂူ neurobiologist ကဆိုသည်။ "တစ်ခုချင်းစီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးနှောက်တစ်သျှူးများ၏သေးငယ်သော volume ထဲမှာ extracellular dopamine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာနှင့်ဖြစ်ကောင်းအာရုံကြောဆိပ်ကမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏လှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်။ "
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များအကျိုးကို၏ search အတွက်ဝင်္မှတဆင့်၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေကြွက်များကိုလေ့ကငျြ့ခွငျးအားဖွငျ့စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဝင်္ကတဆင့်ချင်းစီကြွက်ရဲ့ပြေးစဉ်အတွင်းတစ်သေံညာဘက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချောကလက်နို့ဆုလာဘ်လိုက်ရှာအတွက်လမ်းဆုံမှာ left turn ကညွှန်ကြားချက်အသံလိမ့်မယ်။
အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့ကသူတို့ကစမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းသည် Periodic ကြားကာလမှာကြွက် '' ဦးနှောက်များကဖြန့်ချိလျက်ရှိ dopamine ၏ပဲမျိုးစုံကိုမြင်ရရန်မျှော်လင့်ဟုပြောသည်။ တစ်ဦးအထွတ်အထိပ်အဆင့်ကိုအတွက်အထှတျအထိအဆိုပါကြွက်သည်၎င်း၏ဆုလာဘ်ခါနီးအဖြစ် - သို့သော်သူတို့က neurotransmitter ၏အဆင့်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးမြင့်တက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွဲပြားတစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းကြွက် '' အပြုအမူနေစဉ်, သူတို့ရဲ့ dopamine အဆင့်ဆင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆုလာဘ်၏မြန်နှုန်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပြေးနေသော်လည်းမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
"အဲဒီအစား, dopamine signal ကိုကြွက်က၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကနေဘယ်လောက်ဝေးရောင်ပြန်ဟပ်ဟန်," MIT ကတစ်ဦးနှောက်သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းပြေးသူကိုအမ်း Graybiel ကပြောသည်။ "ဒီပိုမိုနီးကပ်စွာကြောင့်ရရှိသွားတဲ့သည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အချက်ပြမှုဖြစ်လာသည်။ "
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကိုလည်း dopamine signal ကို၏ပြင်းအားမျှော်မှန်းဆုလာဘ်၏အရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြွက်ချောကလက်နို့၏ပိုကြီးတဲ့ဝတ်ပြုမျှော်လင့်အေးစက်ခဲ့ကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ dopamine အဆင့်ဆင့်မြင့်မားအထွတ်အထိပ်ကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။
သုတေသီများကြွက်ဝေးတဲ့ run နှင့်ဆုချီးမြှင့်ရောက်ရှိရန်အပိုဆောင်းအလှည့်စေဖွဲ့သောပိုမိုရှုပ်ထွေးပုံသဏ္ဍာန်ဖို့ဝင်္သက်တမ်းတိုးရေးအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုကွဲပြား။ ဤအပိုရှည်စမ်းသပ်မှုတွေအတွင်း dopamine signal ကိုပိုပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးလာပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာယခင်ဝင်္၌ရှိသကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
"တိရစ္ဆာန်က၎င်း၏မျှော်လင့်ချက်ညှိခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်ဒါဟာသွားကြဖို့နောက်ထပ်ခဲ့ သိ. ရဲ့" Graybiel ကဆိုသည်။
"အလားတူတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်မပါလျှင်ကျွန်မအလွန်အံ့အားသင့်ဖြစ်ချင်ပါတယ်, â€ Graybiel ကဆိုသည်။
မွန်၊ 08/05/2013 - 10:15 pm
ဦးနှောက်သုတေသန McGovern Institute က
ကလေးငယ်များနှင့်အတူခရီးထွက်ခဲ့သူမည်သူမဆိုသိတယ်အမျှဝေးကွာသောရည်မှန်းချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထိန်းသိမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မက်ဆာချူးဆက် (MIT) မှတစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ်ဦးနှောက်ကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုရရှိဘယ်လိုအကြံပြုလျက်, neurotransmitter dopamine ရေရှည်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးအချက်ပြစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ-in ကို dopamine အချက်ပြချို့ယွင်း-မကြာခဏသောလူနာတာဝန်များကိုပြီးဆုံးရန်လှုံ့ဆျောမှုတည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်အခက်အခဲရှိအဘယ်ကြောင့်အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
ယခင်လေ့လာမှုများဆုလာဘ်မှ dopamine နဲ့ဆက်နွယ်နေခဲ့ကြခြင်း, သတ္တဝါများကိုမမျှော်လင့်တဲ့အကျိုးကိုခံရသည့်အခါ dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ Activision နေတာကိုပြသကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား dopamine အချက်ပြမှုများကိုအားဖြည့်သင်ယူမှု, တိရစ္ဆာန်ဆုချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်မှသိရှိလာသောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ဟုယုံကြည်နေကြသည်။
အများဆုံးလေ့လာမှုများအတွက်, ထိုဆုလာဘ်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းကိုအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်သောဘဝမှာတော့သော်လည်းဆန္ဒပြည့်အမြဲချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး: တိရစ္ဆာန်များမကြာခဏအစားအစာရှာဖွေရေးအတွက်သွားလာရမည်ကိုလည်းပိုပြီးချက်ချင်းတွေကိုတုံ့ပြန်နေချိန်မှာဝေးသောရည်မှန်းချက်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ တူညီသောလူသားမြားအဘို့အမှန်: တစ်ရှည်လျားသောလမ်းခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးကယာဉ်မောင်းကိုလည်းအသွားအလာမှတုံ့ပြန်မုဘို့ရပ်တန့်နှင့်နောက်ကျောထိုင်ခုံများတွင်ကလေးငယ်များ entertaining နေစဉ်နောက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆက်လက်တည်ရှိရပါမည်။
အင်စတီကျုမှပါမောက္ခအမ်း Graybiel-တဲ့သူကိုလည်းနှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်အဘို့အလုပ် approximating တစ်ဦးဝင်္တာဝန်စဉ်အတွင်းဘယ်လို dopamine အပြောင်းအလဲများကိုလေ့လာရန်ဦးနှောက်-ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သုတေသန MIT ကရဲ့ McGovern Institute ကမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်ဦးဆောင်တဲ့ MIT ကအဖွဲ့။ အဆိုပါသုတေသီများအကျိုးကိုရောက်ရှိဖို့တစ်ဦးဝင်္သွားလာရန်ကြွက်များလေ့ကျင့်သင်ကြား။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးကြွက်ကညာဘက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချောကလက်နို့ဆုလာဘ်ကိုရှာဖွေကာလမ်းဆုံမှာကျန်ရစ်ဖြစ်စေဖွင့်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တစ်သေံစကားကိုနားထောငျလိမ့်မယ်။
အဲဒီအစားရိုးရှင်းစွာ dopamine ပါဝင်သောအာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာထက်, MIT မှသုတေသီ striatum, အားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လူသိများတဲ့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဖြန့်ချိခဲ့သည်ဘယ်လောက် dopamine တိုင်းတာရန်ချင်တယ်။ သူတို့ဟာ Univ ပေါလု Phillips ကအတူတက်ပူးပေါင်း။ အလွန်သေးငယ်သော, ကိုထညျ့သှငျး, Carbon-fiber ကိုလျှပ်က၎င်း၏လြှပျစစျလက်ဗွေရာအပေါ်အခြေခံပြီး dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry (FSCV) လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့သူဝါရှင်တန်၏။
"တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဝင်္ကတဆင့်လွတ်လပ်စွာပြောင်းရွှေ့သကဲ့သို့ငါတို့သည်တစ်ပြိုင်နက်ဦးနှောက်ထဲမှာအထိလေးကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များမှာ dopamine တိုင်းတာနိုင်အောင်ကျနော်တို့ FSCV နည်းလမ်းအဆင်ပြေအောင်," ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာ, Mark Howe ယခုတစ် postdoc သူသည် Graybiel နှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ယောက်ကရှင်းပြသည် အနောက်မြောက် Univ မှာ Neurobiology ၏ Dept. ။ "တစ်ခုချင်းစီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးနှောက်တစ်သျှူးများ၏သေးငယ်သော volume ထဲမှာ extracellular dopamine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာနှင့်ဖြစ်ကောင်းအာရုံကြောဆိပ်ကမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏လှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်။ "
ယခင်အလုပ် မှစ. , သုတေသီများ, သူတို့ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဖြန့်ချိ dopamine ၏ပဲမျိုးစုံကိုမြင်ရအံ့သောငှါမျှော်လင့်ထားသည့် "ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးအံ့သြစရာတစ်ခုခုတွေ့" Graybiel says: dopamine များ၏အဆင့်အဖြစ် peaking စီတရားခွင်တစ်လျှောက်လုံးတဖြည်းဖြည်းတိုးလာ တိရိစ္ဆာန်အကျိုးကို၏မျှော်လင့်အတွက်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်-အဖြစ်မယ်ဆိုရင်ချဉ်းကပ်။
ရုံးတင်စစ်ဆေး-တချို့ပြေးဖို့တရားခွင်ကနေကွဲပြားအဆိုပါကြွက်များ '' အပြုအမူအခြားသူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန် ရှိ. , တစ်ခါတစ်ရံတိရိစ္ဆာန်များခေတ္တ-ပေမယ့်ရပ်တန့်မယ်လို့ dopamine signal ကိုပြေးမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးကြာချိန်နှင့်အတူကွဲပြားကြဘူး။ မတစ်ဦးဆုလာဘ်ရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများအားဖြင့်အကြံပြုခဲ့ကြောင်းတစ်ခုခုမူတည်ခဲ့ပါဘူး။
"အဲဒီအစား, dopamine signal ကိုကြွက်က၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကနေဘယ်လောက်ဝေးရောင်ပြန်ဟပ်ဟန်," Graybiel ရှင်းပြသည်။ "။ အဆိုပါပိုမိုနီးကပ်စွာကြောင့်ရရှိသွားတဲ့သည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အချက်ပြမှုဖြစ်လာ" ဒီသုတေသီများကလည်းအချက်ပြ၏အရွယ်အစားမျှော်မှန်းဆုလာဘ်၏အရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ: ကြွက်ချောကလက်နို့၏ပိုကြီးတဲ့မရှင်းပြသည်မျှော်လင့်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြသောအခါ, dopamine signal ကိုမြင့်တက် ပိုပြီး steeply မြင့်မားနောက်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်။
အချို့စမ်းသပ်မှုများတွင် T-shaped ဝင်္နောက်ထပ် run ရန်နှင့်အကျိုးကိုမရောက်မီအပိုအလှည့်ဖြစ်စေတိရိစ္ဆာန်များလိုအပ်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးပုံသဏ္ဍာန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဤအစမ်းသပ်မှုတွေအတွင်း dopamine signal ကိုနောက်ဆုံးမှာတိုတောင်းဝင်္၌ရှိသကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်ကိုရောက်ရှိပိုတဖြည်းဖြည်းတက်အပူတပြင်း။ "တိရစ္ဆာန်က၎င်း၏မျှော်လင့်ချက်ညှိခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်ဒါဟာသွားကြဖို့နောက်ထပ်ခဲ့ သိ. ရဲ့" Graybiel ကပြောပါတယ်။
တစ်ခုက '' ပြည်တွင်းရေးလမ်းညွှန်မှုစနစ်က ''
"ဒီ dopamine အဆင့်ဆင့်ပန်းတိုင်ဖို့လမ်းအပေါ်ရွေးချယ်မှုစေနှင့်ပန်းတိုင်အကွာအဝေးခန့်မှန်းရန်တိရစ္ဆာန်ကိုကူညီဖို့အသုံးပြုနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်" ဟုအဆိုပါ Salk Institute မှ, တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ပေမယ့်သူကိုသူတစ်ဦးကွန်ပျူတာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များ၏ Terrence Sejnowski ပြောပါတယ် လေ့လာမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ "ဒီ '' ပြည်တွင်းရေးလမ်းညွှန်မှုစနစ်က '' အစလည်းဝေးကွာသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်အရာကိုလမ်းတစ်လျှောက်ရွေးချယ်မှုလုပ်သူလူသားများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "
Graybiel အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဆနျးစစျဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းတစ်ခုမှာမေးခွန်း signal ကိုဦးနှောက်အတွင်းပေါ်ပေါက်ပုံဖြစ်ပါသည်။ ကြွက်နှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များတိရစ္ဆာန်တိကျတဲ့တည်နေရာအတွက်အခါတက်ကြွဖြစ်ကြောင်းဒါခေါ် "အရပျကိုဆဲလ်တွေ" နဲ့, သူတို့ရဲ့ Spatial ပတ်ဝန်းကျင်၏သိမြင်မှုမြေပုံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်အကြိမ်ကြိမ်ဝင်္ run အမျှ" ဟုသူမက "ကျနော်တို့သူတို့ယခင်ပြေးအပေါ်ကြုံတွေ့သောဆုလာဘ်အနေဖြင့်၎င်း၏အကွာအဝေးနှင့်အတူဝင်္အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအမှတ်ပေါင်းသင်းတတ်ရန်သင်ယူသံသယရှိကြသည်။ " ဟုဆို
လူသားမြားသညျဤသုတေသန၏ဆက်စပ်မှုသည် Graybiel ပြောပါတယ်, "အလားတူတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်မပါလျှင်ကျွန်မအလွန်အံ့အားသင့်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ " ဒါဟာ dopamine အချက်ပြချို့ယွင်းလျက်ရှိသည်ဘယ်သူကိုအတွက်ပါကင်ရဲ့လူနာ, မကြာခဏငွဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းလူသိများရဲ့ နှင့်ရှည်လျားသောအလုပ်တခုကိုပြီးမြောက်ရန်လှုံ့ဆျောမှုတည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်အခက်အခဲရှိသည်။ "သူတို့ကဒီနှေးကွေးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ် dopamine signal ကိုထုတ်လုပ်မပေးနိုငျသောကွောငျ့ဒီတစ်ခါလည်းရဲ့" Graybiel ကပြောပါတယ်။